DEG-DEG: Andrea Pirlo Oo Si Rasmi Ah U Sheegay Xiddiga Magaca Weyn Leh Ee Uu Ugu Horreynba Ka Fasaxay Juventus Ee Koox Cusub Raadsan Doona - Gool24.Net
DEG-DEG: Andrea Pirlo Oo Si Rasmi Ah U Sheegay Xiddiga Magaca Weyn Leh Ee Uu Ugu Horreynba Ka Fasaxay Juventus Ee Koox Cusub Raadsan Doona
Tababaraha cusub ee kooxda Juventus ahna halyeeyga kooxdaas ee Andrea Pirlo oo la filayo inuu shaqo baahsan ka qabto suuqa xagaagan ayaa sheegay in xiddiga ugu horreeya ee kooxda ka baxayaa uu noqonayo weeraryahan Gonzalo Higuain.
Gonzalo Higuain ayaa kamid ahaa xiddigaha waaweyn ee Juventus ka tirsan kuwaas oo horeba su’aashu uga taagnayd mustaqbalkooda kaddib bixitaankii Maurizio Sarri.
Higuain oo horeba Juventus looga fasixi lahaa ayaa la aaminsan yahay inuu xilli ciyaareedkii hore baaqi ugu sii ahaa kooxdaas sababta Maurizio Sarri oo taageere weyn u ah.
Haddaba, Andrea Pirlo oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in ay Higuain kula heshiiyeen inuu xagaagan kooxda ka tago maadaama oo uusan ku jirin qorshaha mashruuca uu ka hirgelinayo Juve.
Pirlo oo arrimaha Higuain ka hadlaya ayaa yidhi “Waxaanu si wadajir ah ula go’aaminay Gonzalo Higuain inuu xagaagan kooxda ka tagi doono, isagu kuma jiro mashruuca anaguna diyaar ayaanu u nahay inaanu u ogolaano inuu baxo”
Higuain ayaa Juventus dhinaca Napoli ugaga biiray heshiis ku kacay 94 Milyan oo euro waxaana uu mudada qaybta ka ahaa usoo dhaliyay 66 gool isaga oo 149 kulan usoo ciyaaray. Sidoo kale Higuain ayaa Bianconeri kula soo guuleystay saddex Serie A.